Nzira yekushandira pamwe ne clutch uye throttle? Kutanga, giya rinofanira kunge riri munzvimbo isina kwayakarerekera. Mushure mekutanga mota, shungurudza batira kusvika kumagumo, wozoisa giya munzvimbo yekutanga yegiya. Ipapo sunungura batira. Kana uchisunungura batira, nonoka. Whe ...
Zvinonzi mabhureki emabhureki haana kugadziriswa kangani kuti achinje. Zvinoenderana nemamiriro ekutyaira uye maitiro ekutyaira. Iyi tsika inokanganisa mashandisirwo emabhureki emabhureki. Kana iwe uchikwanisa kuzviziva zvakanaka, iwe uchaona kuti mune dzakawanda zviitiko hapana chikonzero chekutsika pa b ...
Iko kubatanidza kwepasirese kunoshandisa hunhu hwayo mashandiro torque uye kufamba kunogona kutapurika zvakavimbika. Hunhu hwekubatanidza kwepasirese ndewekuti: chimiro chine akasiyana makona anopinda, uye iwo maviri axial akaisirwa angles eunive